အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ၂၀၁၄ ဇန်န၀ါရီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ၂၀၁၄ ဇန်န၀ါရီ
Posted by kai on Jan 5, 2014 in Editor's Notes | 12 comments
မြန်မာ့ဂဇက် ဖတ်သူကမ်းသူဝေသူယူသူအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှဖြာရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြစေသတည်း။
၂၀၁၃သည် အမေရိကားတွင် မာတင်လူသာကင်း၏ “I haveaDream” နှစ်ငါးဆယ်မြောက်ကျင်းပသောနှစ်ဖြစ်၍ ထိုနှစ်တွင်ပင် နယ်ဆင်န်မန်ဒဲလား အသက် ၉၅နှစ် ကွယ်လွန်ခဲ့ပေသည်။ သူ၏အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားသို့ ကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင် ၉၁ယောက်ထက်မနည်းတက်ရောက်ခဲ့ပေရာ အာဖရိကတိုက်သမိုင်းတွင် မှတ်တမ်းဝင်သည့် ပထမဆုံးစုစည်းမှုဖြစ်ပါ၏။
အဆိုပါလူမည်း၂ဦးသည် လူသားတို့၏အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုသမိုင်းတွင် အတောက်ပဆုံးသူ၂ဦးဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်း( Pope Benedict XVI) အနားယူနှုတ်ထွက်၍ ရဟန်းမင်းနေရာကို Pope Francis လက်ခံရယူသည်။ နှစ်ပေါင်း ၅၉၈တွင် ပထမဆုံးအဖြစ်တခုဟုဆိုကြပေသည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းအသစ်သည် သန်းထောင်ချီသော ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအပေါ်များစွာလွှမ်းမိုးမှုရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။ ဘာသာရေးသည် နိုင်ငံရေးနှင့် အမြဲတစေ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နေပါသည်။
အာရပ်နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ မဆုံးသေးသောစစ်ပွဲကြီးအဖြစ် လူ၁သိန်းကျော်သေကြေပြီး ၂သန်းကျော် ပြောင်းခိုသူဖြစ်ကြရသည့် လူ၂၁သန်းကျော်နေထိုင်သည့် ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်သည် ယခုနှစ်တွင်လည်း “ဆက်တိုက်ကြဦးမည်”ဖြစ်လေသည်။ ပြည်တွင်းစစ်တွင် ဆာရင်ဓာတုလက်နက်သုံးလိုက်သဖြင့် အမေရိကားစစ်တပ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်ပြုပါရန် အိုးဘားမားအစိုးရ၏တောင်းဆိုမှုကို ယုအက်စ်ကွန်ဂရက်မှပယ်ချခဲ့သော်လည်း အမေရိကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ၏ တောင်းဆိုချက်တရပ်အပေါ် ဆီးရီးယား၏အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်သည့် ရုရှားမှ ရုတ်တရက်လိုက်လျောခဲ့သဖြင့် မပြီးဆုံးသေးသောစစ်ပွဲအတွက် လမ်းချိုးကွေ့တခုဖြစ်သွားရသည်။ အဆိုပါလမ်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ရှေ့ရှုသွားနိုင်သည်ဟု မြင်လိုပြောလိုပါသည်။
Kim Jong Un အုပ်ချုပ်ရာမြောက်ကိုရီးယားသည် ၂၀၁၃၏ သတင်းထူးထွက်ရာနိုင်ငံဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။ လူဦးရေ၏တ၀က်ခန့်မျှ (၂၄သန်း) ဆင်းရဲတွင်းကျနေသော အဆိုပါပြည်သည် မင်းဆက်ကဲ့သို့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အုပ်ချုပ်နေသောတိုင်းပြည်ဖြစ်နေမြဲဖြစ်ပြီး နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဦးလေးတော်သူ Jang Song Thaek ကို တိုင်းပြည်သစ္စာဖေါက်တယောက်အဖြစ်စွတ်စွဲကာ အပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်၍ စစ်ခွေးအကောင်၁၂၀အားကျွေးပစ်သည့် ကောလဟလသတင်းများပင်ထွက်ခဲ့သည်။
အမေရိကားတိုက်ကိုပင် နှူကလီးယားဒုံးကျည်နှင့် ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်းရှိနေသော မြောက်ကိုရီးယား၏အတွင်းကျကျ စစ်ရေးနေရာလက်နက်ဒုံးကျည်များအား ၂၀၀၈ခုနှစ်ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လေ့လာခဲ့ဖူးသူတဦးမှာ ယခုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းဖြစ်နေသည်ကို စာဖတ်သူအများသတိထားမိအောင် တင်ပြလိုပါသည်။
အင်္ဂလန်မင်းသား ၀ီလီယံနှင့် ကြင်ယာတော် ကက်သရင်းတို့မှ သားလေး George Alexander Louis ကိုဇူလိုင်၂၃တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ယခုဘုရင်မကြီး Elizabeth IIမှာ သက်တော် (၈၇နှစ် )၊ အိမ်ရှေ့မင်း Charles မှာ သက်တော် (၆၅နှစ် )ဖြစ်နေပြီဖြစ်သဖြင့် ယခုမွေးဖွားခဲ့ရာ မင်းသားလေးမှာ အင်္ဂလန်၏ဘုရင်နေရာဆက်ခံခွင့်ရရန်အလားအလာများစွာရှိသူဟုဆိုချင်သည်။ သူ၏အဖွား မင်းသမီးဒိုင်ယာနာ (၁၉၉၇ကွယ်လွန်) မည်သည့်အခါမှ မသိခဲ့ရသော အိပ်မက်တို့ဖြစ်ပါသည်။
Edward Snowden မှ NSA ၏အမေရိကန်လူထုအပေါ်လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းနေမှုများကို ၀ါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာမှတဆင့် ဖွင့်ချလိုက်သဖြင့် အမေရိကား၏အခြေခံဥပဒေအပေါ် ဖယ်ဒရယ်အစိုးရမှ စောင့်ထိန်းနေခြင်းရှိ/မရှိ မေးခွန်းတို့ထွက်လာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးသတင်းများအရ NSAသည်မည်သည့် ပိတ်ဆို့တားဆီးထားသည့် လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကိုမဆိုထွင်းဖေါက်နိုင်သည့် Quantum Computer တည်ဆောက်နေသည်ဆိုပါသည်။ အင်တာနက်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အိုင်တီခေတ်ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သူအမေရိကား၏ စူပါပါဝါကို မည်သူမည်သို့တားနိုင်မည်နည်းဟု မေးခွန်းထုတ်စရာ နှစ်တို့သာကျန်ရစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Trayvon Martin သေဆုံးမှုတွင် George Zimmerman အပြစ်မရှိဟု တရားရုံးမှဆုံးဖြတ်လိုက်သဖြင့် အမေရိကားတ၀ှမ်းဆန္ဒပြမှုအများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ လူမည်းစပ်သမ္မတ အိုဘားမားမှလည်း သူကျောင်းသားဘ၀က အသားရောင်ခွဲခြားမှုဖြစ်စဉ်တချို့ကို အမှတ်တရပြန်ပြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ တရားရုံးဆုံဖြတ်ချက်ကျသည့် ဂျူလိုင်လတွင် လူမည်းအမျိုးသားတဦး၏ ရက်စက်စွာအသတ်ခံရသော ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရတနာဆိုင်ဝန်ထမ်း မြန်မာအမျိုးသမီးအမှုသည်ကား မထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရပေသည်။ ဤတွင် မီဒီယာ၊ ကွန်မြူနတီတို့၏ အင်အားရှိမှု/မရှိမှုကိုထင်ရှားပြလိုပြောလိုပါသည်။ “ငိုသောကလေးနို့ပိုစို့ရတတ်”ပါသသည်း။
၂၀၁၃သည် အိုဘားမားအစိုးရအတွက် မြုပ်ချည်ပေါ်ချည် အဖြစ်များခဲ့သော်လည်း နစ်ခဲ့သောနှစ်ဖြစ်သည်ဆိုရပေမည်။
ယူအက်စ်ကွန်ဂရက်မှ Affordable Care Act အသက်မ၀င်သွားရန်ရည်ရွယ်၍ အစိုးရဘက်ဂျက်အလုံးစုံကို ချပေးခြင်းမပြုလိုက်သဖြင့် ယူအက်စ်အစိုးရသည် အောက်တိုဘာ ၁ရက်နေ့မှ ၁၆ရက်နေ့အထိ အစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာများရပ်ဆိုင်းလိုက်ရသည်။
တချိန်တည်းတွင် ဥပဒေဖြစ်ပြီးဖြစ်သော Affordable Care Act (Obamacare) ၏အစိုးရ၀က်ဘ်ဆိုက် (HealthCare.gov)သည် ပထမအကြိမ်လူထုသို့ဖွင့်ချ၍ ၀န်ဆောင်မှုများပြုလုပ်နေပြီးနောက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများတက်ပြီး ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်သည် ယူအက်စ်အစိုးရ၏ အိုင်တီပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ပညာရှင်လိုအပ်ချက်များရှိနေကြောင်း ပြချက်တခုဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် ကျမ်းမာရေးနှင့်အိုင်တီပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း များစွာထွက်လာမည် ခန့်မှန်းမိပါသည်။
အဆိုပါ နိမ့်ချည်မြင့်ချည် အချက်၂ခုသည် ယခုနှစ် ၂၀၁၄ ကြားနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင်လွန်စွာအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဟု အတတ်ပြောလိုသည်။ ယခုနှစ်နိုဝင်ဘာ၎ရက်နေ့တွင် ကျင်းမမည့် ကြားနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကွန်ဂရက်အမတ်၄၃၅နေရာနှင့် စီးနိတ်အမတ် ၃၃နေရာပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရပိတ်သိမ်းခံရခြင်းဖက်လူထုအားရုံကျခြင်းများလျှင် ကွန်ဂရက်၏အမတ်အများစုဖြစ်သော ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ပါတီ ရှုံးနိမ့်ခြင်းရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိ၍ အိုဘားမားကဲယားမှ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ လူထုအတွက်အဆင်မပြေ ချွတ်ချော်လျှင်မူကား ဒီမိုကရက်တို့၏ စီးနိတ်ခုံနေရာများ စွန့်လွှတ်ရဖွယ်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ လွှတ်တော်အမတ်နေရာတို့သည် လာမည် ၂၀၁၆ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ကြီးစွာသော သက်ရောက်မှုရှိမည်မှာသေချာပါသည်။ ထုံးတမ်းအားဖြင့် ရီပါ့ဗလစ်ကင်ပါတီ၏အလှည့်ဖြစ်သော အိမ်ဖြူတော်နေရာအတွက် “Checks and Balances”ယူရန်မှာ ကွန်ဂရက်တွင် ဒီမိုကရက်တို့ အများစုဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်ဟု မှန်းဆလိုပါကြောင်း…။
ဇန်န၀ါရီ ၁ရက်နေ့တွင် ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုကို ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်မှ တရားဝင်ပြုပေးလိုက်သဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအတွက် မီးစိမ်းတပွင့်လင်းလာသည် ယူဆရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးတခုဖြစ်သော ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ယူအက်စ်အစိုးရ၏ Harrison Narcotics Tax Act of 1914 မှတွက်လျှင် ရာစုနှစ်တိတိတခုအတွင်း ဒေါ်လာဘီလီယံများစွာသုံးစွဲနေခြင်းအား လွှတ်ချတော့မည့်သဘောတို့မြင်နေရသည်။
ဤအဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့လူသားများအား လူနေမှုစနစ်တို့ကြီးစွာလှည့်ပြောင်းစေမည်ယူဆပါသည်။
မျိုးချစ်နေ့ Patriots’ Day ( Sept 11) တွင် ဘော့စတွန်တွင် ဗုံးခွဲလုပ်ကြံမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ လူပေါင်း ၂သောင်း၃ထောင် မာရသွန်ပြေးနေရာ အားကစားပွဲတော်တွင်ဖြစ်ခဲ့သော အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုတွင် လူ၃ဦးသေဆုံးပြီး ၂၆၄ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသည်။ ဘော့စတွန်သည် အမေရိကား၏သမိုင်းဝင် မျိုးချစ်စိတ်အခြေကျရာမြို့ဖြစ်ပေရာ အကြမ်းဖက်သမားတို့ကိုမြန်စွာသိရှိဖမ်းမိအရေးယူနိုင်ခဲ့သည်။ Boston Strong ဆောင်ပုဒ်ဟူသည်အမှန်တကယ်သက်ဝင်နေကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ခြင်းပေတည်း။
Drone အား လူသတ်လက်နက်တခုအဖြစ်မှ အမေရိကားပြည်သူအများအသုံးပြုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်အခြေချသည့် လုပ်စဉ်တို့ကို FAA (Federal Aviation Administration) မှချနေခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်သည် အင်တာနက်အား စစ်တပ်သုံးမှ လူထုအသုံးပြုနိုင်ရန် ကလင်တန်အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ပေးနေခဲ့ပုံတို့ကို အမှတ်တရဖြစ်စေပြီး Amazon.com မှလည်းသူ့ထံမှ ပစ္စည်းမှာယူသူများကို Drone သုံး၍အိမ်အရောက်ပို့ပေးမည်ဆိုနေသဖြင့် ယခုနှစ်မှစတင်ကာ (အင်တာနက်ကဲ့သို့သော) ကမ္ဘာ့လူနေမှု အပြောင်းအလဲကြီးတခုကို မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေပါသည်။ အဆိုပါနည်းပညာအပြောင်းအလဲကို Jeff Bezos ၏ Amazon နှင့် Elon Musk ၏ SpaceX & Tesla တို့မှဦးဆောင်မည် ထင်ရသည်။ စတော့ရှယ်ယာသမားများ သတိပြုမိရန်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်က AT&T သည် T-Mobile အားဝယ်ယူသိမ်းရန်အထိပြင်ဆင်ခဲ့ဖူးသည်။ ၂၀၁၃တွင်ကား T-Mobile သည် အမေရိကား၏ နံပါတ်၎အဆင့်တွင် ၂၀၁၃အတွင်းသုံးစွဲသူအများဆုံးရရှိသည့် ကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပေသည်။ ယခု၂၀၁၄နှစ်ဆန်းတွင်ကား AT&T မှ မှသူ့ထံပြောင်းလာသူအား ဒေါ်လာ ၄၅၀ပေးမည့်အစီအစဉ်တခုကို ရုတ်တရက်ကြေငြာလိုက်ရာ AT&Tနှင့် T-Mobile မိုဘိုင်းဖုံးစစ်ပွဲကြီးတခု စတင်ဆင်နွှဲကြရပြီဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ဖြစ်ကြစေ စစ်ပွဲတွင်သေချာပေါက်နိုင်သူများမှာ မိုးဘိုင်းဖုံးသုံးစွဲသူများဖြစ်သည်ဟု တညီတညွတ်တည်း ဆိုကြသည်။ “လာခြင်းကောင်းသောပြိုင်ဆိုင်ခြင်း စစ်ပွဲ”ပေတည်း။
ကမ္ဘာကြီးပူးနွေးလာသည်ဟုဆိုကြသည်။ ၂၀၁၄နှစ်ဦးတွင်ပင် အမေရိကား၏ ရှေ့မြောက်ဒေသတခွင် လူသန်း၁၀၀ခန့်နေထိုင်သောဒေသကြီးတွင် နှင်းမုန်တိုင်းကြမ်းဝင်ကာ အအေးလွန်ပြီး ဒုက္ခများနေသည့်သတင်းများဖြစ်နေပါလေသည်။ လက်တွေ့နှင့်ယှဉ်ကာ သံသယတို့ဖြစ်နေသည့်လူသားများထံသို့ မိခင်သဘာဝသည် ကမ္ဘာ့အပြင်းထန်ဆုံးမုန်တိုင်းကြီးများပေးခဲ့သည်။
ရေချိုခန်းခြောက်မှု၊ ရေခဲပြင်ကြီးများပြိုကျမှု၊ တောမီးကြီးလောင်မှုတို့ပြခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂသည်လည်း ကမ္ဘာ့အစိုးရများထံ ဒေတာအချက်အလက်များထုတ်ပြန်ပြသပြီး အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီ။ ၂၀၁၄သည့် ကမ္ဘာမြေကို ကယ်တင်ရန်ကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်း အထူးလုပ်ယူရတော့မည့် ပထမနှစ်ဖြစ်သင့်ပါသည်။
လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များတွင် ကမ္ဘာ့အပူချိန်အထူးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ရာ ကမ္ဘာလူဦးရေ သန်း၁၅၀၀ကျော်ရေချိုပြတ်လပ်မှုတို့နှင့်ကြုံတွေ့ရမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ရေချိုပြတ်မည့်နိုင်ငံစာရင်းတွင်ပါနေပေရာ မုန်သုန်မိုးကြီးလက်ခံရရှိလျှက်မှ ကပ်ဆိုက်ခံရမည်ကြည့်လျှင် မြန်မာတို့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့လှသည်ကို ထင်ရှားမြင်သာလှသည်။
တိုင်းရင်းသား၁၃၅မျိုးနှင့် အစိတ်စိတ်ကွဲလျှက်မှ အားသုံးစုစည်းထားရသောတိုင်းပြည်တွင် လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး ခွဲခြားနှိမ်ချမှုတို့ပြင်းထန်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
တိုင်းပြည်တည်ထောင်ခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏သမီးရင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပင် သမ္မတမဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင် ကာကွယ်ပြဌာန်းထားသော ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ ဆိုသော စာရွက်တို့သည် မြန်မာပြည်တိုးတက်ကြီးပွားရေးအတွက်အကြီးဆုံးသော အတားအဆီးဖြစ်နေသည်ဟုပြောလိုသည်။
၂၀၁၃ကုန်နှင့်ယခုတနှစ်လုံး အခြေခံဥပဒေပြင်မှုတို့နှင့် ကြိုးစားရမည့်သဘောရှိသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများစနစ်တကျမရှိခြင်းကြောင့် ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်ကြုံတွေ့ရပါက လူအများအပြားသေဆုံးပျောက်ကွယ်ရဖွယ်ရှိသည်။
အာဏာရှင်ဟောင်းဦးနေ၀င်းမိသားစုဝင်များအားလုံး ထောင်တွင်းမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းများနှင့်ပေါင်းမိသွားကာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးတို့တွင် လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်လာဖွယ်ရှိပါသည်။
ကမ္ဘာတန်းမှီစီမံကိန်းကြီးများအတွက် အတားအဆီးဖြစ်နေသော ဆန္ဒပြမှုများ၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းများအား ဆက်မြင်ကြရပါမည်။
“နောက်မှတွက်လျှင်ထိပ်”ရောက်နေသောနိုင်ငံသည် “ရှေ့မှတွက်သောရှေ့” ရောက်လိုလျှင် ဖြစ်ခဲ့သည့်သမိုင်းများမှ သင်ခန်းစာယူကာ ထိခိုက်ခဲ့သည့်အတွေးအခေါ်တိုင်းကို ပြောင်းပြန်လှန်သင့်လှသည်ဟု နှစ်ဦးအထူး တိုက်တွန်းလိုက်ရပါကြောင်း…။
ဘာသာရေးသည် နိုင်ငံရေးနှင့် အမြဲတစေ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နေပါသည်။
၂၀၁၄ သည် မြန်မာပြည်အတွက် သင်္ကြန် အမြောက်သာ
စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုတဲ့ သဂျီးအတွက်…. :-)
(ကျွန်မတို့ နိုင်ငံက မဆင်းရဲဘူး။ပြည်သူတွေက ဆင်းရဲနေတာ။
အဲဒီတော့ အခု ကျွန်မပြောချင်တာက ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်မီးမှန်မှန်မရတာဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စနစ်မမှန်လို့ ပဲ ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်
ကျွန်မတို့လျှပ်စစ်မီးရဖို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရေရဖို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ရဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်ပြင်ဆင်ရမှာက စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မရဲ့ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်
mindset တွေကို စနစ်နဲ့ ပြင်လို့ မရဘူးလား ဘဂျီး..
ကျုပ်ပြောလေ့ရှိတာက.. လူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုလွှမ်းမိုးတာ.. ဘာသာရေး..။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုချင်ရင်.. လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရနိုင်လောက်တဲ့.. ထုတ်နိုင်လောက်တဲ့.. အခြေအနေ..အတွေးအခေါ်…ဖန်တီးတည်ရှိရမယ်..။ (အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေမြှောက်ပေးထားတဲ့.. ) ပတ်ဝန်းကျင်လေထု..သဘာဝဂေဟတွေလုပ်နေလို့မရဘူး..။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အခြေခံဟာ..စွမ်းအင်ဆိုတာ..သိရမယ်..။
စွမ်းအင်အတွက်.. ကမ္ဘာ့ဒေသတွေမှာ.. မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်.. ဖန်တီးတယ်..။ အပိုင်းစီးတယ်..။ ယူတယ်..။ သိမ်းတယ်..။ စစ်ဖြစ်တယ်..။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့.. ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွား(ပဲ)ကြည့်ပြီး.. စွမ်းအင်ကို.. ရှာရမယ်..။လုပ်ရမယ်..။ ဖန်တီးရမယ်..။ အတွေးအခေါ်ရှိရမယ်..။ အတွေးအခေါ်မှန်ရမယ်..။
လူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို.. လွှမ်းမိုးတာ.. ဘာသာရေး..။
အစစ်အမှန်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မြတ်စွာဘုရားက လောကုတ္တရာအကျိုးချည်း ဟောကြားခဲ့တာ မဟုတ်ပဲ လောကထဲမှာ နေနည်းထိုင်နည်း၊ စီးပွားရှာနည်း၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရွေးချယ်နည်း၊ ကိုယ်တိုင်လည်း တပါးသူအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင် နေထိုင်ကျင့်သုံးနည်း…. အများကြီး ဟောပြောဆုံးမခဲ့ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအတိုင်း အတိအကျ အပြည့်အ၀ လိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင် နေရေးရော သေရေးအတွက်ပါ အားလုံးပြည့်စုံသွားမှာပါ။
စနစ်နှင့်ဆိုင်သော..အကြောင်းတရားအချို့ ကြောင့်..တော့.. ဟုတ်အိ ။
ဘာသာရေးကို ပြင်ရမယ် ဆိုတော့
ဗုဒ္ဓ လား ? မွတ်စ် လား? ခရစ် လား? ဟိန္ဒူ လား?
နိုင်ငံအတွင်းဘာသာရေးအခန်းကန်ဒ ရပ်တည်မူ့တွေကို ပုဒ်မတွေ
ဒီအပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်သဂျီး ရေ။
ကျတော်ကသိသလောက်စာနဲ့ချမပြတတ်တော့ သူဂျီး အမြင်ထဲ နဲ့
ကြော်ငြာတွေ မရှိတော့တာလား မသိဘူးးး
ပို့(စ) တင်ရတာ ကောင်းသွားပြီ လို့။
သင်ပုန်းကတော့ ကဘာအရေးဒွေ စုံလင်စွာနဲ့
ရွှေရောင်ပိတ်ကားထက်မှာ ဆက်လက်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြတာပေါ့လို့ …